प्रकाशित मिति २४ चैत्र २०७५, आईतवार ०६:३० लेखक नेपाली जनता
बलात्कार गरी हत्या गरेको अभियोगमा एक युवकलाई जन्मकैदको सजाय
भोजपुर । जिल्ला अदालत भोजपुरले बालिका बलात्कार गरी हत्या गरेको अभियोगमा एक युवकलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
काठमाडौं । २०७२ सालको भूकम्पयता काठमाडौं उपत्यकामा कुनै महामारी वा प्राकृतिक प्रकोप आएको छैन तर काठमाडौं महानगरपालिकाले अनावृष्टि, अतिवृष्टि,…
स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव, सिटामोल समेत छैन
त्रिपुरा स्वास्थ्य केन्द्र त्रिपुराकोट, पहाडा, लिकु, सुँ र…
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आगामी शनिबार हुन गइरहेको चियापान कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको छ ।
पार्टी एकतापछि पहिलो पटक…
नेताको खर्च कसले व्यहोर्छ ?
काठमाडौं । नेताहरु ‘हाछ्यु’ आएपनि उपचारका लागि कुदेर बैंकक, सिंगापुर पुग्ने गरेका छन् । पहिले–पहिले नेताहरु भारतको नयाँ दिल्ली…
काठमाडौं । सवारी लिएर न्युरोड जाँदै हुनुहुन्छ ? जादै हुनुहुन्छ भने भोलि आइतबारदेखि घरबाटै आफूलाई आवश्यक र उपयुक्त पार्किङ…